प्लास्टिकको चामल बिक्री गरेको आरोपमा छापा! दुई बोरा चामल नियन्त्रणमा - Everest Dainik - News from Nepal
प्लास्टिकको चामल बिक्री गरेको आरोपमा छापा! दुई बोरा चामल नियन्त्रणमा
वीरगञ्ज । प्लास्टिकको चामल बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा वाणिज्य कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ रानिघाटस्थित राजलक्ष्मी खाद्यान्न भण्डारमा छापामारी दुई बोरा चामल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज कोरोना पुष्टि भएका १७ जना एकै परिवारका
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत माछा सुपरजोनका ८२ दशमलव १ हेक्टर क्षेत्रफल बाढीले कटान गरेको थियो । माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ सालदेखि यस जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
सो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि दुई करोड रु ९३ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गर्नाका साथै साना सिँचाई लगायतका काम गरिने सो कार्यालयले जनाएको छ । रासस
याे पनि पढ्नुस वीरगञ्जमा बारुण यन्त्रका कर्मचारीको गोली हानी हत्या